Advocacy: Ampio Hiaro Ireo Bilaogera Eran-tany · Global Voices teny Malagasy
Advocacy: Ampio Hiaro Ireo Bilaogera Eran-tany
Voadika ny 24 Desambra 2017 19:00 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2006)
Mety hahita olana amin'ny mpitandro filaminana ny bilaogera, tahaka ireo hafa lohalaharana amin'ireo hetsika mampiroborobo ny fahalalahana miteny sy ny fampitambaovao. Niaina tranga voalohany amin'io izahay tato anatin'ny Global Voices miaraka amin'ny fihazonana tsy ara-dalàna ny iray amin'ireo toniandahatsoratray, Hao Wu. Efa telo volana izy izao no voatanan'ireo manampahefana Sinoa any aminà toerana tsy fantatra, tsy afaka tsidihan'ny fianakaviany sy ny mpisolovavany.
Alaa Abd El Fatah, ilay bilaogera Egyptiana nahazo maripankasitrahana, no farany fantatra fa niharan'io tsy hafalian'ny fitondrana io, izay isan'ireo maro voafonja nandritra ireo hetsika am-pilaminana hiarovana ny fiovàna demôkratika sy ho fanohanana ny fahaleovantenan'ny fitsaràna ao amin'ny firenena.
Natomboka tsy misy hatak'andro sady naparitaka be ny hetsika anaty aterineto ho fanohanana ny Avotsory i Alaa!, ahitàna hetsika maro, isan'ny vao haingana indrindra tamin'izany ny Free Alaa Frappr Map.
Nametraka takelaka manara-maso ireo tranga amin'izao fotoana izahay ato amin'ny Global Voices ho fanampiana amin'ny fanangonana ireo hetsika rehetra manohana ny bilaogera. Manana takelaka wiki ihany koa izahay – Global Voices Advocacy – izay ahafahan'ny tsirairay manampy vaovao momba ireo bilaogera voarahona sy ireo hetsika natao ho azy ireo.
Azia Afovoany sy Kaokazy 5 ora izay
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 4 andro izay